Shiinaha BONOVO DIGDOG DG10 Mini Excavator oo leh warshad lifaaqyo badan leh iyo alaab-qeybiyeyaal | Bonovo
BONOVO DIGDOG DG10 Mini Excavator leh lifaaqyo badan
Badeecadani oo leh muuqaal qurux badan, qaabeyn sare, barafuun ka sarreeya, isticmaalka shidaalka oo hooseeya, kala duwanaansho hawleed ballaaran. Waxay ku habboon tahay in la sii daayo ciidda lagu koriyo qudaarta, cagaarinta xerada waaxyaha dowladda hoose. qodista godka dhir beerista ee Xannaanooyinka Fuit-land. burburin laamiga laamiga ah, isku darka walxaha ciid-quruurux ah, shaqada dhismaha ee cidhiidhiga ah iwm. Isticmaal xajinta degdegga ah waxay ku dari kartaa aaladaha ku xirnaanta sida auger, dubbe Haydarooliga, baaldi qashin ah, xajin, suulka, baaldi janjeera, ripper, rake iyo wixii la mid ah. Waxay yareyn kartaa dayactirka iyo kharashaadka howlgalka, culeyska shaqaalaha ayaa hagaajiya makaanikada, maalgashiga hooseeya, soo laabashada sare Bonovo waxay diyaar u tahay inay ku siiso qorshooyin dhisme iyo soo iibsi.
DG10 mini Excavator leh qaab-dhismeed baal yar oo Tailless ah iyo ikhtiyaar ikhtiyaar-wareejin, oo loo adeegsan karo hawlgal cidhiidhi ah
wareejin bilaa dab ah, jiif laga jiidan karo, kor u kaca leexashada, qaabeynta heerka koowaad, nidaam xasaasi ah oo xasaasi ah, raad caag la beddeli karo, heerka ilaalinta deegaanka
Ku saabsan Miisaanka
Sideed u qaadi doontaa qodistaada? Hubso inaysan ku cusleyn dejinta aad qorsheyneyso inaad isticmaasho. Haddii kale, waxaad u horseedi doontaa culeys aad u badan gaarigaaga soo jiidaya, ama ma awoodi doontid inaad dhaqaajiso qodista qolka.
Nooca mashiinka No. DG10
Nooca wadada Raadinta xarkaha
Mashiin miisaanka 1940lbs / 880kg
Awoodda baaldi 0.02m3
Cadaadiska Nidaamka 16Mpa
Ugu badnaan kartida darajada 300
Xoog Qodida Baaskiilada 14KN
Nooca hawlgalka Kabaal farsamo
Guud ahaan Halbeegyada DG10
Ku saabsan Qiyaasaha:
Dhammaan qodayaasha yaryar waxay ka yar yihiin kuwa cabbirka buuxa, laakiin waxaa jira cabbiro kala duwan oo ku jira qaybta yar. Qaarkood weli wey ku weynaan karaan shaqadaada, halka kuwa kalena laga yaabo inay aad u yar yihiin.
Si loo go'aamiyo cabbirka qodda aad u baahan tahay, waa inaad qiimeysaa goobta shaqada. Dhul qoduhu waa inuu awood u yeeshaa inuu la jaanqaado aagga u baahan in laga shaqeeyo. Tan macnaheedu waa inay awood u yeelan karto inay si sax ah u dhaqdhaqaaqdo, ma ahan oo keliya taam
Markaad fiirineyso cabirka, tixgeli dhererka, ballaca, iyo dhererka. Haddii kale, waxaad ku dambayn kartaa cabbir aan shaqaynayn.
Mashiinka Model ISBADALKA / KOOP
Nooca naaftada hal-dhululubo ah
Ugu badnaan Awood 7kW/1800r / daqiiqo
Ugu badnaan Torque 26.8N.m
Guud ahaan Cabirka Guud ahaan Dhererka 2120mm
Ballaaran Guud ahaan 930mm
Dhererka guud 2210mm
Baaxadda jiifka 930mm
Gawaarida sare nadiifinta dhulka 410mm
Dhererka qolka 2210mm
Daab Ballaaran 930mm
Max.lift ee daab dozer 325mm
Max.depth ee daab dozer 175mm
Nidaamka Haydarooliga Nooca bamka Bamka geerka
Awoodda mashiinka 22L / Min
Mashiinka Mashiinka safarka ah Eaton 310
Mashiinka lulashada KERSEN
Ku saabsan Dhererka Gacanta
Qodobo kala duwan ayaa la yimaada gacmo kala duwan. Maadaama gacanta ay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan qodista, hubi inay u shaqeyn doonto waxaad u baahan tahay inay sameyso.
Tixgeli mashruucaaga iyo goobtaada shaqada. Miyuu gacan caadi ah qaban doonaa khiyaamada? Haddii kale, hel cabir adiga kugu habboon.
Hubka qodda waxaa lagu heli karaa cabirro dhaadheer iyo kuwo dheereyn kara. Kuwani waxay u oggolaanayaan gaadhis dheer iyo dhererka qashinka sare.
Wax badan kuuma tari doonto haddii qod-qoduhu uusan gaari karin weelka loogu tala galay in alaabta lagu daadiyo, markaa hubi inuu yahay cabirka saxda ah.
Kala duwanaanta shaqada
Dheer Dhererka 2490mm
Dheer Dhererka 1750mm
Qoto Dheer 1400mm
Max. Qoto dheer Qoditaanka 1320mm
Max. Shucaaca shucaaca 2400mm
Min. Radius Swing 1190mm
Raadiyaha Swing Dabada 795mm
Lifaaqyo kaladuwan oo loogu talagalay xulashooyinkaaga
Lifaaqa lifaaqyada - Jebiye / Waxaad dooran kartaa lifaaqyo kugu habboon shaqadaada gaarka ah.
Faahfaahinta alaabta: Faahfaahin kasta oo yar ayaa gacan ka gaysata farqiga weyn!
- Euro 5 emisssion Yanmar matoor
- Joystick-ka tijaabada ah ee ku shaqeeya labada dhinac ee kursiga wuxuu keenaa hawlgal raaxo leh
- Bir adag oo laba jibbaaran oo bir ah ayaa siisa jidh deggan
- Bug-gacmeedka ayaa ku taageeri kara wadaha inuu tago labadaba xaaladaha shaqada gudaha iyo dibaddaba
- Gawaarida gawaarida ee la soo celin karo waxay bixisaa waxqabadka hagaajinta, u fudud gaadiidka
Hore: Qaybaha Gawaarida BONOVO Rubber Track Rubber Crawler 230 72 39
Xiga: BONOVO DIGDOG DG12 Mini Excavator leh lifaaqyo badan
1 ton qodayaal yaryar oo iib ah qodayaal yaryar oo iib ah
1 tan oo qoda yar
1t qodayaal yaryar
Qodista mini jaban
qodista shiine mini
Qodista yaryar ee Shiinaha
mashiinada escavator mini qodayaasha qoda
mashiinka qodida mini
mashiinka qodda mini qoda
qodista mini qodayaal
qodista mini qodayaasha 1ton
Haydarooliga Mini Qodista
Qodista Mini Digger
mini qodayaal iib ah
qodayaasha yaryar 1 tan
qodayaasha yar yar 1 tan Shiinaha
qodayaasha mini 1 ton gurguurate Haydarooliga
qodista yar 1t
qodista yar 1ton
shixnad mini shiina
qoda qodayaasha mini
jeexjeexa yar ee iibka ah
qodayaal yaryar oo qoda
qodida mini mini
Qodista Yar ee Iibinta
Qodista Yar Yar
BONOVO DIGDOG DG25 qodista mini qodayaasha 2.5 ilaa ...
BONOVO DIGDOG DG18 1.8 ton qodis mini qod ...
BONOVO DIGDOG DG20 mini qoda 2ton gurguurto ...
BONOVO DIGDOG DG12 Mini Excavator leh dhowr ...